Mpaka tàhaka an’i Greta Thunberg niantso an-telefaona niezaka hamandrika ny Praiminisitra Makedoniàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2019 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Shqip, Español, English
Say natambatra avy amin'ny an'ny Praiminisitry ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra (RNM) Zoran Zaev ( Sary ho an'ny sehatra natao ho an'ny daholobe, an'ny Governemanta RNM) sy ny an'ilay mpikatroka, Greta Thunberg (Sary an'ny parlemanta Eorôpeàna, CC BY).
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Masoivohombaovao Meta.mk , tetikasa iray an'ny Metamorphosis Foundation. Ny dika avoaka eto ambany dia ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty. Ny Metamorphosis Foundation no nikarakara ny Kaonferansa Erantany e-Society (fiarahamonina eletronika) tanisaina ato anatin'ny tantara.
Ny 29 Novambra, nampahafantarin'ny governemanta makedoniàna ho fantatry ny rehetra fa nisy olona roa niezaka ny hamitaka ny praiminisitra Zoran Zaev tamin'ny fanolorana ny tenan'izy ireo ho ilay Soisa vavy mpikatroka ho an'ny fiovaovàn'ny toetrandro Greta Thunberg sy ny rainy.
Fanambarana nandritra ny ” Konferansa Erantany e-Society.mk: Andrimpanjakana misokatra sy fiantsorohana andraikitra “ nataon'i Marjan Zabrchanec, mpanolotsaina manokan'ny PM, izay tsy namaritra mazava ny daty nitrangan'ilay resaka an-telefaona.
Nampian'ilay mpanolotsaina fa nandalo taminà iraka diplaomatika makedôniàna iray ny fandaminana ilay resadresaka, sy hoe teny antenantenany teny dia tonga saina i Zaev fa tsy ny tena Greta Thunberg ilay nifampiresaka taminy.
Nolazain'i Zabrchanec fa ny fanadihadiana iray natao no nahafahana namintina hoe “fanafihana iray mifangaro” natao hamelezana ireo andrimpanjakàna makedôniàna ilay tranga niseho, ary laharana avy any Etazonia sy “marika fantadaza” no nampiasain'ireo nanatontosa azy.
Taorian'ilay fanadihadiana, nampilaza tamin'ny fianakaviana Thunberg ny governemanta ao Makedonia Avaratra.
Nambaran'i Zabrchanec fa ilay fanafihana dia “somary sarotsarotra kokoa noho ilay nataon'ireo rosiana mpanadrohadro,” entiny hilazàna ilay tamin'ny 2018 sy tany ampiandohan'ny 2019 fony nifampiresaka elabe tamin'i Zaev ireo olona 2 manana ny maha-izy azy amin'ny media rosiàna, Lexus sy Vovan, nisandoka ho ny filohampirenena Okrainiàna, Petro Poroshenko.
Marjan Zabrchanec andray fitenenana nandritra ny kaonferansa e-Society.mk tao Skopje, Makedonia Avaratra, nokarakarain'nyMetamorphosis Foundation. Sary ani Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Taorian'ny namborahan'ireo Rosiàna roa ireo ny raharaha tamin'ny Jolay 2019, niala tsiny tamin'ny vahoaka i Zaev noho ny tsy fahatomombanan'ny arofenitra momba ny fiarovana ao aminy, tamin'ny filazana fa voafitaky ny “rafitra iray tsara voatra sy mahay mamorona izy, izay natao hamelezana sy hanimbàna ireo olona sy firenena mirona mankamin'ny faritra eoropa-atlantika,.”
Efa nikendry ny filoha frantsay Emanuel Macron taminà fisandohana olona tahaka izao ihany koa ireo olona roa ireo tamin'ny Aprily 2019..
Heverin'ireo manampahaizana manokana ao an-toerana ho toy ny fampielezankevitr'i Kremlin ireny mpikatroka ireny. Ny tanjon'ny fanafihana tahaka ireny dia ny hisintona ampaham-pitenenana manahirana vitsivitsy avy amin'ireo olona manana ny toerany ary hanaporofoana ny tsy fahombiazan'ireo andrimpanjakana natao lasibatra, amin'izay fotoana izay dia ho very ny fitokisan'ny vahoaka.
Ny 27 Jolay, nanambara drafitra vaovao ho entina manakana ireo fandisoambaovao i Makedônia Avaratra, ahitàna ny “famerenana mandinika ny arofenitra efa misy amin'ny resaka fiarovana, ary famoronana vaovao, raha ilaina izany, ho an'ny fifandraisana anatin'ireo andrimpanjakana sy ny fifandraisana amin'ireo rafitra/fikambanana any ivelany.”
Greta Thunberg nataon'i Kremlin lasibatra
Greta Thunberg, mpikatroka, 16 taona, no mpanorina ny hetsika #FridaysForFuture (Zoma ho an'ny hoavy) izay vao haingana no nanetsika olona an-tapitrisa, ankizy sy olondehibe, manerana izao tontolo izao mba hitaky amin'ny governemantan-dry zareo hanao hetsika manoloana ny olan'ny fiovaovàn'ny toetrandro. Ny 23 Septambra, nanao lahateny nampihetsipo izy nandritra ny Vovonana ho an'ny Toetrandro tao amin'ny Firenena Mikambana, tany New York, niantso ireo mpitarika rehetra manerantany mba hanampy amin'ny fampitsaharana ny fiakaran'ny hafanàna erantany.
Araka ny lazain'ny EUvsDisinfo, tetikasa iray an'ny East Stratcom Task Force, famatsiambolan'ny Fiombonambe Eorôpeàna, lasa lasibatry ny fandisoambaovao ataon'ny fampielezankeivtra Rosiana i Greta Thunberg:
Fanairana iray ho an'ireo mpandiso vaovao mpomba an'i Kremlin i Greta Thunberg, tsy hoe fotsiny noho izy mandà ny hiondrika noho ireo fitsaratsarampoana hoe inona no azon'izay tovovavy 16 taona ambara sy atao (na dia mitovy tsy misy valaka aza ny fanbjakazakan-dehilahy sy ny fandisoambaovao). Lasibatra i Greta noho izy endriky ny hetsibahoaka erantany – tena hetsipanoherana tsy manampaharoa ataon'ny vahoaka, izay zavatra tsy mety ho azon'ireo mpomba an'i Kremlin ekena velively. Ny fanaovana izany dia mety hampibaribary hoe hatraiza no mety handàvana ireo olompirenena rosiàna ty ho afaka hanao hetsipanoherana am-pilaminana.
Taorian'ny nisehoan'ity mpikatroka ity teo anoloan'ny Firenena Mikambana, nisy mpanolotra iray tao amin'ny fahitalavi-panjakana rosiàna namaritra zy ho toy ny tovovavy marary saina tsy ampy fieritreretana,” “mpaminanin'ny andianà mpanao tsy refesimandidy vaovao” ary “Mesia tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mpiziriziry.”
Naverin'ireo solotenan'ny media rosiàna ao amin'ny faritra Balkàna navoaka ihany koa ireo karazana fanivaivàna tahaka ireny natao an'i Thunberg.
Nifanitsy indrindra tamin'ny fikarakaràna ny hetsika #FridaysForFuturet tamin'ny 29 Novambra tao Skopje ilay antso an-telefaona mampiahiahy azon'i Zaev..